बाँकेमा ठुला औद्योगिक समूहको प्रवेश, अम्बेदेखि भाटभटेनीसम्मको लगानी बिस्तार - Arthapage
बाँकेमा ठुला औद्योगिक समूहको प्रवेश, अम्बेदेखि भाटभटेनीसम्मको लगानी बिस्तार
प्रकाशित मितिः १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार १६:२९ April 26, 2019
नेपालगन्ज,१३ बैशाख : देशका ठुला औद्योगिक समूहले बाँकेमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसले देशभर बाँके लगानीका लागि उपयुक्तक्षेत्र हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बाँकेले धेरै पुराना उद्योग गुमाएको थियो । नयाँ स्थापना हुन सकिरहेका थिएनन् भने पुराना बन्द अवस्थामा थिए । तर राजनीतिक स्थीरता र उर्जा समस्या समाधान भएपछि धमाधम लगानी थपिदै छ । स्थानीयदेखि देशका ठुला औद्योगिक समूह लगानी गर्न हौसिएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य बाँके औद्योगिक हबका रुपमा स्थापित भइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक स्थिरता र उर्जा लगायतका समस्या समाधान भएपछि लगानीको उत्साह थपिएको उनको बुझाई छ । ‘बाँके जिल्ला आफैमा लगानीकर्ताका लागि सुनौलो ठाउँ हो । तर अस्थिरता र उर्जा लगायतका समस्याले लगानीकर्ता आर्कषित भएका थिएनन् । अहिले अवस्था सुध्रिएको छ ।’– बैश्यले भने,–‘अब कुनै लगानीकर्ताले बाँकेलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।’
कुन कुन उद्योग आए, कुन आउँदै ?
बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७४र२०७५ मा उद्योग बिभागबाट बाँकेमा उद्योग सन्चालनका लागि गत आर्थिक वर्षमा जय अम्बे स्टील, सगरमाथा स्टील ईण्डष्ट्रिज, नेपाल वोलहोप एग्रीटेक प्रालि, गोल्डेन गेमिङ्ग इन्टरनेशन क्यासिनो, वर्षा रिसाईक्लिङ्ग ईण्डष्ट्रिज , विकास फ्लोर मिल र भिभो मोवाईल नेपाल प्रालिको सर्भिस सेन्टरले अनुमति पाएका थिए । अनुमति पाएका मध्ये अधिकांस उद्योग सन्चालनमा छन् भने केही उद्योगले पूर्वाधार निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । केही महिनामा पूर्वाधार निर्माणको काम सक्ने बित्तिकै बाँकी उद्योग पनि पूर्णरुपमा सन्चालनमा आउने छन् । उद्योग बिभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७४ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा बाँकेमा ठुलो उद्योग स्थापनासंगै लगानीमा पनि तिब्र बिस्तार भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७५ मा बाँकेमा चार वटा उद्योग स्थापना भएका थिए । ती उद्योगमा ५६ करोड हाराहारीमा लगानी भित्रिएको थियो । सातवटा उद्योगबाट जम्मा १ सय ४२ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा बाँकेमा उत्साहजनक लगानी भित्रिएको उद्योग बिभागको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष बिभागमा दर्ता भएका सात उद्योगले जिल्लामा ७ सय ८२ जनालाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको वातावारण सिर्जना गर्दै छन् ।बाँके जिल्लामा स्टील उद्योगको आर्कषण नै देखिएको छ । देशकै सबैभन्दा ठुलो औद्यागिक समूह जय अम्बे स्टील प्रालिले जानकी गाउँपालिकामा रु ४ अर्व १५ करोड चुक्तापुँजी सहित उद्योग सन्चालनको तयारी गरिरहेको छ । आगामी बैशाखबाट उत्पादन शुरु गर्ने गरी पुर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यस्तै सगरमाथा स्टील उद्योगले पनि जानकी गाउँपालिकाको खजुराखुर्दमा रु २४ करोड चुक्ता पुँजी सहित उद्योग स्थापना गरेको छ । उद्योग बिभागका अनुसार, दर्ता भएका सात मध्ये नेपाल वोलहोप एग्रीटेक प्रालिले चितवन पछिको दोस्रो शाखा हो । चितवनमा रहेको उद्योगले कोहलपुरमा रु २४ करोड लगानी गरे उद्योग सन्चालनमा ल्याईसकेको छ ।
उक्त उद्योगले दानाहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । बाँकेमा रु २४ करोड लगानीमा भिएमआई ग्रुप अन्र्तगत बर्षा रिसाईक्लिङ्गले प्रेसर कुकुर उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै विकास फ्लोर मिलले रु २ करोड ४५ लाख लगानी गरेको छ । भिभो मोवाईल प्रालिले अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर स्थापनाका लागि रु ३० लाख लगानी गर्ने उदेश्य सहित गत आर्थिक वर्षमा उद्योग बिभागबाट दर्ता प्रमाणपत्र लिएको छ । बाँकेमा होटल क्षेत्रमा सोल्टी समूहले समेत पाँच तारे होटल समेत सन्चालन भइरहेको छ ।
लगानीकर्ता आर्कषको कारण ?
संघीयता पछि बनेको कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजार हिस्सा ओगट््न कुनै पनि उद्योगले नेपालगन्जमा औद्योगिक प्लान्ट नराखी सुःखै छैन् । यि दुई प्रदेशमा दैनिक जसो हरेक उत्पादनको बजारक्षेत्र बढ्दै गएको छ । विकास निर्माण तिव्ररुपमा भइरहँदा निर्माणका सामाग्रीको माग ह्वात्तै बढेको छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्र बढ्दै गएको शहरीकरणले उपभोग्य सामाग्रीको बजार थपिदैछ ।
त्यस्तो अवस्थामा पूर्वमा उत्पादन भएका सामाग्री पश्चिममा ल्याएर बिक्री गर्दा ढुवानी धेरै रकम खर्चिनु भन्दा यही उद्योग खोलेर उत्पादन गर्नु उद्योगीका लागि दिर्घकालिनरुपमा फाईदाजनक हुन्छ । ठुलो स्केलमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने र पश्चिममा राम्रो बजार सम्भावना देखेका उद्योगहरुले उद्योग सन्चालन गर्न यिनै कारणले नेपालगन्जलाई रोजेका हुन ।
बाँकेमा लगानीकर्ताहरु आर्कषित हुने अर्को कारण भनेको सहजरुपमा जग्गा प्राप्त हुनु । अन्य ठाउँ भन्दा सस्तो र भनेजति जग्गा उपलब्ध हुने भएका कारण पनि यहाँ लगानीकर्ता आर्कषण देखिन्छ । अन्यत्र जग्गाको मूल्य धेरै छ, भने जति जग्गा नपाईने अवस्था समेत देखिन्छ । उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेपछि यहाँ पनि जग्गाको मुल्य बढ्न थालेको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासंग जोडिएको जानकी गाउँपालिकामा मात्रै दर्जनौ ठुला उद्योग सन्चालन हुनुका पछाडी यही कारण भेटिन्छ । भारतसंग सिमा जोडिएको र एकिकृत भन्सार जाँचचौकी बन्दै गरेको र नेपाल भारत जोड्ने रेल समेत आउँदै गरेको र त्यसले आयात निर्यातमा समेत फाईदा पु¥याउने दुरदृष्टि राखेर यहाँका उद्योग सन्चालन भइरहेको छ ।
लगानीकर्तालाई अझै प्रोत्साहन गरौं
देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएसंगै अन्यत्र जस्तै बाँकेमा पनि ठुला उद्योग स्थापना हुने क्रम रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ भन्छन,–‘हरेक हिसावले बाँके जिल्लामा लगानीमैत्री वातावरण छ । यसलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । लगानकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनसंगै बाँके र बर्दियाले आफुलाई ठगेको महसुस गरिरहेका बेला औद्योगिक करिडोर बनाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ । लगानी बिस्तारका लागि उपयुक्त ठाउँ भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बैश्य बताउँछन् । सरकारले बाँकेको नौवस्तामा पाँच नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम पनि शुरु गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार १६:२९ |
Prevहाइवेमा ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
Nextचालू आवमा ६.८१ आर्थिक वृद्धि हुने, प्रतिव्यक्ति आय ३० डलर बढ्ने